Shir lagu dhalleeceeyey weerarkii Somaliland ee Buuhoodle, laguna taageerayo dhaawaca dagaalka, oo ka dhacay Galkacyo. – Radio Daljir
Shir lagu dhalleeceeyey weerarkii Somaliland ee Buuhoodle, laguna taageerayo dhaawaca dagaalka, oo ka dhacay Galkacyo.
Galkacyo, Jan 16 – Shir ay isugu yimaadeen madaxda, siyaasiyiinta, iyo indheergaradka gobolka Mudug ayaa lagu dhalleeceeyey weerarkii ay shalay ku soo qaadeen magaalada Buuhoodle ciidanka Somaliland.
Dagaalka ayaa gastay khasaare isugu jira noole, dhaawac, iyo maal intaba.
Badi dhaawcii dagaalka ayaa maanta la keenay magaalada Galkacyo, hadana lagu dabiibayaa cisbitaalada magaalada Galkacyo.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Jaamac Tigey oo ka hadlay munaasabada ayaa ku sifeeyey weerarkii Somaliland ay ku soo qaaday Buuhoodle isir-sooc.
Md. Tigey waxaa ku baaqay in taageero dhinac kasta ah loo fidiyo shacabka gobollada Sool, Sanaag & Cayn, gaar ahaan reer Buuhoodle.
Waxaa intaas ku daray in dhaawaca loo fidi doono gargaar caafimaad kan ugu wanaagsan, lana daryeeli doono inta ay ka soo kabanayaan.
Maxamed Cali Yusuf ‘Gaagaab’ oo isna ka hadlay shirka ayaa sheegay in aanay raali ka ahayn dagaalka gardarada ah ee lagu soo qaaday Buuhoodle.
“In madaxweynaha Somaliland uu maanta yiraahdo waxaan ku duulaynaa beel aayaheeda ka tashanaysa waa gardaro, waa wax aan la qaadan karin, waa wax aanaan yeeli karin” ayuu yiri Md. Gaagaab.
“Gardado yeeli mayno, Cidna ku gardaraysan mayno” ayaa uu ku daray hadalkiisa.
Waxaa uu ugu baaqay shacabka Somaliland in ay garawsadaan gafafka ay madaxdoodu ku hogaaminayaan.
“Nafteena, maalkeena iyo dhiigeenna aan ugu diyaar garawno” ayuu yiri Md. Gaagaab.
Ma aha markii ugu horeysay ee Somaliland ay weerar ku soo qaado Buuhoodle. Kal hore ayaa dagaal khasaare lixaad leh gaystay ay ku soo qaadeen deegaanka Kalshaale & Maygaale oo ka tirsan isla gobolka Cayn, kulaalana magaalada Buuhoodle.